Jehovha Anotinyaradza Pakutambudzika Kwedu Kwose | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAngola Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKenya Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRomania Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Mwari wokunyaradza kwose, anotinyaradza pakutambudzika kwedu kwose.”—2 VAK. 1:3, 4.
NZIYO: 33, 41
Nei tingatarisira kuti muwanano uye mumhuri muchava nematambudziko?
Kunyengetera kwakanyaradza sei vamwe vanhu vanotaurwa muBhaibheri?
Ungaitei kuti unyaradze vamwe?
1, 2. Jehovha anotinyaradza sei pakutambudzika kwedu uye Shoko rake rinotivimbisei?
IMWE hama yechidiki isina kuroora yatichati Eduardo, yakataura zvaiinetsa kune mumwe mukuru akaroora anonzi Stephen. Eduardo ainge achifunga nezvemashoko ari pana 1 VaKorinde 7:28 ekuti: “[Vanoroora kana kuroorwa] vachava nedambudziko munyama yavo.” Akabvunza kuti, “‘Idambudziko’ rakaita sei iroro, uye ndingaita sei naro kana ndikaroora?” Asati apindura mubvunzo iwoyo, Stephen akaudza Eduardo kuti afunge zvimwewo zvakanyorwa naPauro zvekuti Jehovha ‘ndiMwari wokunyaradza kwose, anotinyaradza pakutambudzika kwedu kwose.’​—2 VaK. 1:3, 4.
2 Jehovha ndiBaba vane rudo, uye anotinyaradza patinosangana nematambudziko. Unogona kunge uine pamwe pawakatsigirwa uye pawakatungamirirwa naMwari achishandisa Shoko rake. Jehovha akaita kuti zvinhu zvifambire zvakanaka vashumiri vake vekare uye tinogona kuva nechokwadi chekuti anoda kuti zvidarowo kwatiri.​—Verenga Jeremiya 29:11, 12.
3. Tichapindura mibvunzo ipi?
3 Zvinova nyore kutsungirira kana tikaziva kuti matambudziko edu ari kukonzerwa nei, angava matambudziko emuwanano kana kuti emumhuri. Saka ndezvipi zvimwe zvinhu zvinokonzera “dambudziko” rakataurwa naPauro? Mienzaniso ipi iri muBhaibheri uye yemazuva ano inogona kutibatsira kuwana nyaradzo yatinoda? Kuziva izvozvo kuchatibatsira kutsungirira.
4, 5. Ndezvipi zvimwe zvinoita kuti pave ‘nedambudziko munyama’?
4 Pashure pekusika mukadzi wekutanga, Jehovha akamupa kumurume kuti ave mudzimai wake. Jehovha akabva ati: “Murume achasiya baba vake naamai vake uye achanamatira mudzimai wake uye vachava nyama imwe.” (Gen. 2:24) Asi sezvo tese tiine chivi, kupinda muwanano uye kutanga imba kunogona kuita kuti veukama vanetsane. (VaR. 3:23) Mukadzi anenge asisiri pasi pevabereki vake asi pemurume wake. Mwari akapa murume simba rekuva musoro wemudzimai wake. (1 VaK. 11:3) Izvi zvinoomera vamwe vanenge vachangopinda muwanano. Maererano neshoko raMwari, mudzimai anofanira kubvuma kuti achatungamirirwa nemurume wake kwete nevabereki vake. Vaya vachangobva kupinda muwanano vanogona kunetsana nehama dzemudzimai kana dzemurume, uye iri rinogona kuvawo dambudziko.
5 Vakaroorana vanogonawo kuzvidya mwoyo mudzimai paanoudza murume wake kuti, “Ndava nepamuviri.” Kazhinji mufaro wevaviri vacho unogona kukanganiswa nekuzvidya mwoyo nenyaya dzeutano dzinogona kumuka mudzimai paanenge akazvitakura kana kuti paanenge asununguka. Uye vanofanira kufunga nezvemari inenge yava kudiwa kubva panguva iyoyo zvichienda mberi. Pane zvimwe zvavanofanira kuchinja kana mwana wacho azvarwa. Amai vanogona kunge vava kushandisa nguva yavo yakawanda pakurera mwana wavo. Murume anogona kuona sekuti mudzimai haasisina basa naye nekuti mudzimai anenge akabatikana nekurera mwana. Ukuwo murume anenge ava nezvakawanda zvekuita. Izvi zvinodaro nekuti anenge ava nemumwe munhu wekurera uye wekuriritira.
6-8. Vari muwanano vanganzwa sei kana vakatadza kuva nevana?
6 Pane rimwewo dambudziko rinosangana nevamwe vari muwanano. Vanogona kunge vachida chaizvo kuva nemwana asi zvichiramba. Mukadzi akasabata pamuviri anogona kushungurudzika zvikuru. Munhu anogona kungozvidya mwoyo kunyange akapinda muwanano uye akava nemwana, asi kusazadzika kwechishuwo chekuva nemwana kunotovawo “dambudziko munyama.” (Zvir. 13:12) Munguva dzeBhaibheri, kushaya mbereko kwaiita kuti munhu ashorwe. Ndosaka Rakeri, mudzimai waJakobho, airwadziwa nekuona mukoma wake achibereka vana. (Gen. 30:1, 2) Mamishinari ari kushumira munyika dzine vanhu vanowanzoita vana vakawanda anowanzobvunzwa kuti nei asina vana. Pasinei nekutsanangura kwavangaita zvakajeka, vamwe vangavapindura vachiti, “Iii, tichakunyengetererai!”
7 Kana kuti funga nezveimwe hanzvadzi yekuEngland yaida chaizvo mwana asi zvichiramba. Akabva apfuura zera rekukwanisa kuita vana. Akati akarwadziwa zvikuru paakaziva kuti chishuwo chake chaisazozadzika munyika ino. Iye nemurume wake vakasarudza kutsvaga mwana wekutora zviri pamutemo kuti vamurere sewavo. Asi akamboita chinguva achirwadziwa. Akati: “Ndaiziva kuti kuva nemwana wekurera hakuzoenzani nekubereka wangu pachangu.”
8 Bhaibheri rinotaura kuti mukadzi wechiKristu ‘anochengeteka nokubereka vana.’ (1 Tim. 2:15) Izvi hazvirevi kuti kubereka mwana kana kuva nevana kunoita kuti munhu ave neupenyu husingaperi. Asi zvinoreva kuti kana mudzimai achirera vana uye achiitawo mamwe mabasa epamba zvinogona kuita kuti asava netsika yekuita makuhwa uye kupindira munyaya dzevamwe. (1 Tim. 5:13) Kunyange aine vana, anogona kusangana nemamwe matambudziko anowanika muwanano uye mumhuri.
Munhu angatsungirira sei kana akafirwa nemunhu waanoda? (Ona ndima 9, 12)
9. Nei kufirwa nemurume kana mudzimai riri dambudziko rakakura?
9 Patinotaura nezvematambudziko emuwanano, pane rimwe risingakurumidzi kufungwa nezvaro. Kufirwa nemurume kana mudzimai ndiro dambudziko rakakura rinosangana nevakawanda. Anenge asara anogona kunge asina kumbobvira afunga kuti zvaizoitika kwaari. VaKristu vanotenda zvakasimba vimbiso yaJesu yekuti kuchava nerumuko. (Joh. 5:28, 29) Tariro iyoyo inobatsira sei anenge asara? Inonyaradza zvikuru. Iyi ndiyo imwe nzira yatinotsigirwa uye yatinonyaradzwa nayo naBaba vedu vane rudo, vachishandisa Shoko ravo. Iye zvino ngatikurukurei kuti vamwe vashumiri vaJehovha vakabatsirwa sei nenyaradzo yaanopa.
KUNYARADZWA PATINENGE TIRI MUMATAMBUDZIKO
10. Hana akanyaradzwa sei pakushungurudzika kwaaiita? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
10 Hana, mudzimai waErikana waaida zvikuru, ane dambudziko raakasangana naro. Ainge asina mbereko asi mumwe mudzimai waErikana ainzi Penina aibereka vana. (Verenga 1 Samueri 1:4-7.) “Gore negore,” Hana aitsvinyirwa naPenina. Izvozvo zvaiita kuti Hana ashungurudzike zvikuru. Akatsvaga kunyaradzwa kuburikidza nekunyengetera kuna Jehovha nezvenyaya yacho. ‘Akanyengetera kwenguva refu pamberi paJehovha.’ Aitarisira here kuti Jehovha aizomupa zvaainge akumbira? Anofanira kunge aitarisira kudaro. Pasinei nezvaizoitika, “chiso chake hachina kuzonetsekazve.” (1 Sam. 1:12, 17, 18) Aivimba kuti Jehovha aizopedza dambudziko rake rekushaya mbereko kana kumunyaradza neimwewo nzira.
11. Kunyengetera kunotinyaradza sei?
11 Matambudziko acharamba aripo chero bedzi tiine chivi uye tichiri munyika ino inotongwa naSatani. (1 Joh. 5:19) Kunyange zvakadaro, zvinofadza chaizvo kuziva kuti Jehovha ‘ndiMwari wokunyaradza kwose.’ Imwe nzira inotibatsira kutsungirira matambudziko atinosangana nawo ndeyekunyengetera. Hana akadurura mwoyo wake kuna Jehovha. Saizvozvowo, patinenge tiri mumatambudziko, hatifaniri kungogumira pakuudza Jehovha manzwiro atinenge tichiita. Tinofanira kuteterera kwaari, tichitaura manzwiro edu zvichibva pasi pasi pemwoyo.—VaF. 4:6, 7.
12. Chii chakabatsira Ana kuti awane mufaro?
12 Kunyange zvazvo tingasurukirwa zvikuru nemhaka yekushaya mbereko kana kufirwa, tinogona kuwana nyaradzo. Muprofitakadzi Ana akafirwa nemurume wake pashure pekunge vagara vese kwemakore 7 chete. Bhaibheri haritauri kuti aiva nevana here kana kuti kwete. Ana aiitei pazera remakore 84? Ruka 2:37 inoti: “Akanga asingamboshayikwi patemberi, achiita basa dzvene usiku nemasikati, achitsanya nokuteterera.” Ana akawana nyaradzo nemufaro pakushumira Jehovha.
13. Taura muenzaniso unoratidza kuti shamwari dzechokwadi dzinotinyaradza sei veukama pavanotiodza mwoyo.
13 Patinowadzana nehama nehanzvadzi dzedu, tinowana shamwari dzechokwadi uye dzepedyo. (Zvir. 18:24) Paula anoyeuka kusurukirwa kwaakaita amai vake pavakasiya chokwadi aine makore 5. Kukurira dambudziko iri kwaisava nyore. Asi nekufamba kwenguva akakurudzirwa zvikuru mumwe piyona anonzi Ann wemuungano mavo paakaratidza kuti aida kumubatsira pane zvekunamata. Paula anoti: “Kunyange zvazvo Ann aisava neukama neni, kundida kwaaiita kwakandibatsira zvikuru. Kwakandibatsira kuti ndirambe ndichishumira Jehovha.” Paula achiri kushumira Jehovha akatendeka. Ari kufarawo zvikuru nekuti ava kushumirazve pamwe chete naamai vake muungano. Ann ari kufarawo nekuti akabatsira Paula kuti arambe achishumira Jehovha.
14. Vaya vanonyaradza vamwe vanokomborerwa sei?
14 Patinenge tichiitira vamwe zvakanaka, tinowanzokanganwa matambudziko edu. Hanzvadzi dzakaroorwa nedzisina dzinoziva kuti dzinowana mufaro wakakura pakushanda pamwe naMwari pakuita basa rekuparidza mashoko akanaka. Chinangwa chavo ndechekukudza Mwari kuburikidza nekuita kuda kwake. Vamwe vanotoona kuita basa reushumiri semushonga unovabatsira. Tese zvedu tinoita kuti muungano muve nekubatana patinoratidza kuti tine hanya nevamwe, vari mundima uyewo vari muungano. (VaF. 2:4) Muapostora Pauro akaratidza muenzaniso wakanaka panyaya iyi. Akava ‘saamai vanoyamwisa’ kune vaya vaiva muungano yeTesaronika uye akanga akaitawo sababa pane zvekunamata.—Verenga 1 VaTesaronika 2:7, 11, 12.
15. Ndivanaani vane basa rekudzidzisa vechidiki chokwadi?
15 Chimwe chatinofanira kufunga nezvacho inyaradzo nerubatsiro zvatinopa kumhuri. Dzimwe nguva vatsva vanokumbira vaparidzi vakasimba pakunamata kuti vavabatsire kudzidzisa vana vavo chokwadi, kana kutoitisa vana vacho chidzidzo cheBhaibheri. Magwaro anoratidza kuti vabereki ndivo vane basa rekudzidzisa vana vavo. (Zvir. 23:22; VaEf. 6:1-4) Dzimwe nguva vabereki vanenge vachida kubatsirwa nevamwe uye vanoonga rubatsiro rwakadaro. Asi izvozvo hazvirevi kuti vabereki havachafaniri kudzidzisa vana vavo. Zvinokosha kuti vabereki vagare vachitaura nevana vavo kuti vasvike pakunyatsovaziva.
16. Chii chatinofanira kuyeuka pakubatsira vana?
16 Kana mubereki akasarudza kuti vana vake vadzidziswe nemumwe munhu, munhu iyeye haafaniri kubva azviona semubereki wavo. Pamwe pacho Chapupu chinogona kukumbirwa kudzidza Bhaibheri nevana vane vabereki vasingafariri chokwadi. Kunyange zvakadaro, Chapupu chacho chinofanira kuziva kuti kubatsira vana pane zvekunamata hakurevi kuti chatova mubereki wevana vacho. Uye kunenge kuri kuchenjera kuitisa vana vacho chidzidzo cheBhaibheri pamba pavo paine vabereki vavo kana kuti paine chimwe Chapupu chabva zera kana kuitira chidzidzo chacho pane imwe nzvimbo yakakodzera pavanoonekwa nevanhu. Izvozvo zvinoita kuti pasazova neanofungira kuti pane zvakaipa zviri kuitwa. Zvinotarisirwa kuti nekufamba kwenguva vabereki vacho vanogona kuzoita basa ravakapiwa naMwari rekudzidzisa vana vavo nezvake.
17. Vana vanganyaradza sei vamwe mumhuri?
17 Vechidiki vanodzidza kuda Jehovha uye kuteerera mazano ake vanogona kunyaradza vamwe mumhuri. Izvozvo vanozviita nekuremekedza vabereki vavo uye nekushanda nesimba kuti vabatsirewo nedzimwe nzira. Uyewo vana pavanoramba vakatendeka kuna Jehovha, izvozvo zvinokurudzira mhuri yese zvayo. Mafashamo asati aitika, Rameki, muzukuru waSeti, ainamata Jehovha. Murume iyeye akataura nezvemwanakomana wake Noa achiti: “Achatinyaradza pabasa redu nepakurwadziwa kwemaoko edu kunobva panyika yakatukwa naJehovha.” Uprofita ihwohwo hwakazadzika Jehovha paakabvisa kutukwa kwakanga kwaitwa nyika. (Gen. 5:29; 8:21) Vana vanoramba vakavimbika kuna Jehovha vanonyaradza mhuri dzavo, zvichibatsira vese kutsungirira matambudziko iye zvino uye mune ramangwana.
18. Chii chinogona kutibatsira kutsungirira pasinei nematambudziko kana miedzo yatinosangana nayo?
18 Kunyengetera, kufungisisa mienzaniso iri muBhaibheri uye kuwadzana nevanhu vaJehovha zviri kubatsira mamiriyoni evanhu iye zvino kuti vanyaradzwe mumatambudziko avo ese. (Verenga Pisarema 145:18, 19.) Kuziva kuti Jehovha anogara akagadzirira kutinyaradza kuchatibatsira kutsungirira matambudziko atingasangana nawo iye zvino uye mune ramangwana.
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA June 2017
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA June 2017